China Car and Boat Body Manufacturing and Factory | Jrain
Noho ny tombony maro toy ny eto ambany, ny fiara sy ny sambo fiberglass dia vokatra mafana be tato ho ato ao amin'ny indostria maro toy ny fitaterana, fananganana, elektronika, fiara kilalao, yacht, jono sy ny sisa.
Ankoatr'izay, raha ny fampandrosoana ny fahalalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia saika ny firenena rehetra no mametra ny fanapahana ny hazo, izay nanosika ireo sambo manao fiberglass satria ny fiberglass no fitaovana ilaina hanamboarana lakana antonony sy kely.
Ny fitaovana mifandraika mifandraika amin'ny fiara fiberglass dia misy bemosse, tafo fiara, mpanaloka, mpamono bateria, mpamaody, sns
Raha ny kojakoja ho an'ny sambo fiberglass dia misy fialofana amin'ny masoandro, fitoeram-pisakafoanana amin'ny rano, lakana milomano, sns.
Ny vatan-tsambo sy vatan-tsambo Fiberglass dia asongadin'ny:
- fanoherana ny faharatsiana (manohitra ny appendage aquatic) sy ny fanoherana ny harafesina;
- Ny serivisy mandritra ny serivisy, mampihena ny asa fikojakojana ary mandoa vola be;
- endrika sy marevaka;
- Ny lanja maivana, raha oharina amin'ny vokatra vy, dia afaka mamonjy ny lanjan'ny 80 ~ 40%;
- tanjaka avo sy fiarovana tsara;
- fitondran-tena malefaka sy ny fitrandrahana tsara;
- Tany malefaka sy maro loko;
- Mora ampiasaina, azo averina amin'ny fisafidianana fitaovana sy laminate samihafa.
- Ny volon-koditra ivelany misy misy paraffin sy ultraviolet mpitrandraka azo antoka mba hanasitranana ny fikosoham-bary mety sy hanakanana ny fahasimban'ny hazavana ultraviolet.
Ny Jrain dia tantanan'ny ekipa mpiketoka mafy ary miaraka amin'ny fototra teknika matanjaka. Manolo-tena izahay amin'ny famatsiana vokatra avo lenta amin'ny mpanjifa amin'ny vidiny mifaninana.
Ny Jrain mijoro amin'ny vokatraany - hahita ny serivisy aorian'ny varotra izahay rehefa mahita ny vokatra.
Miezaka manatsara ny fanatsarana ny orinasa izahay ary maniry ny hanome fenitra tsara, fahombiazana ary serivisy izay mahatonga an'i Jrain ho fikambanana mahamora.
Manaraka: Mpankafy sy mpanam-boninkazo
Ny sambo boaty FRP
Vatan'ny fiara an'ny FRP
Vatan'ny fiara GRP
Nohavaozina Fiberglass, Masinina fanamafisana GRP, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Famolavola grating, hamolavola,